သတင်း - ၂၀၂၀.၇.၉
အမျိုးသားများအတွက် Spandex စေး catsuit
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ထည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပေါင်းစပ်ပေးသောတစ်နေရာတည်း၌ရှိသောစီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်သည်လွတ်လပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာ - spandex latex (ရေမျက်နှာပြင် / မှန်မျက်နှာပြင်)၊ အတိုင်ချိတ်ထားသည့်နိုင်လွန်နံရံများကိုအသုံးပြုသည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောလေးဆမြင့်သော elasticity ဖြစ်စဉ်နှင့် CNAS အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုဆက်သွယ်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ; အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ Natural latex ပစ္စည်းများနှင့်ဆင်တူသော်လည်းစျေးနှုန်းသည်သဘာဝစေးကုတ်အင်္ကျီ၏သုံးပုံတစ်ပုံသာရှိသည်။ သို့မှသာဖောက်သည်များအနေဖြင့် gel coat မှရရှိသောရိုးရှင်းသော sexy နှောင်ကြိုးကိုခံစားနိုင်ပြီးခေတ်မီသောဘောင်းဘီများ၏စတိုင်ကျသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင်သင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောအ ၀ တ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ F နှင့် T စီးရီးများကဲ့သို့သောပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ၌ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံများကိုပိုမိုတပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်အမြင့် ၁၅၀ မှ ၁၀၀ စင်တီမီတာရှိပြီးအလေးချိန် ၄၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၉၀ ကီလိုဂရမ်အထိရှိနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်သောဖြတ်တောက်မှုခုံသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းအရွယ်ကိုပိုမိုတိကျစေပြီးပိုမိုထိရောက်စေပြီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် CAD အသိဥာဏ်ရှိသောအရွယ်အစားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည်ရိုးရာစိတ်ကြိုက်မြန်နှုန်းကိုများစွာတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖက်ရှင်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ sexy အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုခြင်းကိုစီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ယူမှတ်ပြီး၊
ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ - ရိုးရှင်းပြီး sexy ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စတိုင်
ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်များ: ဖက်ရှင်အဝတ်အစား၊ sexy ဖက်ရှင်။ ဖက်ရှင်ကိုပိုမို sexy ဖြစ်စေရန်သင် ၀ တ်နိုင်သည့်အတွင်းခံအဝတ်အစားများပြုလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်း sexy လမ်းကြောင်းကို ဦး ဆောင်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်နောက်ဆက်တွဲအရာများဖြစ်လာသည်။ သူတစ်ပါးသွားချင်သော်လည်းလမ်းမလျှောက်ရဲသောလမ်းကိုလျှောက်နေကြပြီ! MiaSein သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပထမ ဦး ဆုံး sexy လမ်းကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုဖန်တီးရန်ရုပ်သံလိုင်းအေးဂျင့်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုပိုမိုရိုးသားစွာအတူတကွစုစည်းပေးသည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့တင်ပို့ခြင်း (FedEx DHL UPS TNT ARAMEX)
ကွန်ပျူတာဖြတ်တောက်ခြင်းအိပ်ရာ, ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေ, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပို့ဆောင်မှုထိရောက်မှုကိုသေချာစေရန် ၁. အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ CAD ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊
ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသောအသိဉာဏ်ပြားပြုလုပ်သည့်စနစ် ၁၀ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသောဥာဏ်ရည် CAD ပန်းကန်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အရွယ်အစားတိကျမှုတို့ကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
၃။ တစ်ခုတည်းသောစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ၊ ၂၄ နာရီအတွင်းအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်မှုမြန်နှုန်း၊ ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်အချက်အလက်များကို ၃ နှစ်ကြာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
၅။ အဓိကထုတ်ကုန်ကိုလွတ်လပ်စွာသုတေသနပြုပြီးဖွံ့ဖြိုးသည်။ အဆိုပါထည်ရှားပါးထူးခြားတဲ့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖော်ရွေသည်။
Spandex Latex သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှသီးခြားစီတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသောစေးကပ်သည့်စေးထည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ nano- ပေါင်းစပ်နည်းပညာကိုချမှတ်။
၎င်းသည်လေးဘက်စလုံးတွင်မြင့်မားသော elasticity ရှိပြီး crack ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ရေကိုစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့်အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်မှု၏ချွေးထွက်ခြင်းများရှိသည်။
Spandex စေးစေးအစေးကပ်မှု - ပထမအလွှာသည်ပလတ်စတစ်ရောနှောထားသော PU film ဖြစ်ပြီးဒုတိယအလွှာသည်အရက်ထိုးထားသော spandex အလွှာဖြစ်ပြီးတတိယအလွှာသည် nano-adsorption အလွှာဖြစ်သည်။
ကြေးမုံ spandex စေးထည်ဖွဲ့စည်းမှု - ပထမအလွှာသည်အရောအနှောရောစပ်ထားသော PU film ဖြစ်ပြီးဒုတိယအလွှာသည်အရက်ထိုးထားသော spandex အလွှာ၊ တတိယအလွှာသည် nano-adsorption အလွှာဖြစ်ပြီးစတုတ္ထအလွှာသည်ရောစပ်ထားသော PU film ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ spandex latex tights များ၏ရောင်းအားပမာဏသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်သို့တင်ပို့မှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်သည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားသမိုင်းတွင်အသစ်သောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုလူကြိုက်များစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးလူကြိုက်များတဲ့စတိုင်လ်တွေယူဆောင်လာမယ့်ဒီဇိုင်နာအသစ်တစ်ခုကိုငှားလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အထည်အလိပ်မှဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအထိလွတ်လပ်စွာပြီးစီးခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုကိုအချိန်မီညှိနှိုင်းခြင်း၊ ဖောက်သည်၏တုန့်ပြန်မှုများကိုပထမဆုံးအကြိမ်နားထောင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ပြည်တွင်း၌သာမကပြည်ပ၌နာမည်ကောင်းရပြီး၊ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိပလက်ဖောင်းအမြောက်အမြားရောင်းအားသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမှာပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပအေးဂျင့်များနှင့်လက်ကားရောင်းသူများ၊ သူတို့ကအစကောင်းသောအရောင်းထိန်းသိမ်းထားပါပြီ။ ဖောက်သည်များနှင့်အေးဂျင့်လက်ကားရောင်းသူများကကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ရောင်းချနိုင်ပါစေ။
ဆယ်နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် CAD ပန်းကန်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်၏အသိဉာဏ်ရှိအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဗားရှင်းကိုလွတ်လပ်စွာတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အ ၀ တ်အထည်ကွန်ပျူတာပန်းကန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်အသစ်နှင့်ပြည့်စုံသောအထည်ချုပ် CAD စနစ်ဖြစ်သည်။ ဤစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးအ ၀ တ်အထည်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်မှုအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောအချက်အလက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အသိဥာဏ်ရှိစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဒေတာများသည်ပိုမိုတိကျသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖောက်သည်များအတွက် ပို၍ သင့်တော်သောအဝတ်အစားများဖန်တီးရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဝတ်အစားသည်သာမန်အဝတ်အစားနှင့်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်အထူးဒီဇိုင်နာများ၊ အထူးထည်ထည်ထည်ထည်များ၊ အထူးပြုလုပ်ထားသော CAD ပန်းကန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်များနှင့်လုပ်ငန်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလှည့်ကျသူများလိုအပ်သည်။ စုံလင်ခြင်းကိုလိုက်စားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ catsuit သည်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်။ ချောမွေ့သောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ခါးကိုအံ ၀ င်ပြီးအရမ်းချောမွေ့သည်။ အပေါ်မှအောက်သို့ခေါက်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချုပ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်အပ်နှံထားသောအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုမေးမြန်းနေသရွေ့သင်လိုအပ်သောအဝတ်အစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
poducts အသစ် 6.Our
လက်ရှိတွင်တရုတ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် coronaviruses အသစ်များဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်၎င်းကိုအလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ်ခန္ဓာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အဝတ်အစားအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြုံအကာအကွယ်ဝတ်စုံများနှင့်မျက်နှာဖုံးများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကာအကွယ်ဝတ်စုံသည်တစ်ခါတည်းသုံးနိုင်သော PE ရုပ်ရှင်နှင့်ယက်မဟုတ်သောပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာအပြည့်ဖြင့်ရှေ့ဇစ်နှင့်ပါးပျဉ်းပါသည့်အကာအကွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ နေ့စဉ်ကာကွယ်မှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာဖုံးများသည်သာမာန်တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးများနှင့် KN95 မျက်နှာဖုံးများနှင့်မတူပါ။ ဒါဟာရိုးရာမျက်နှာဖုံးများ၏အားနည်းချက်များကိုစွန့်လွှတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းသည်အလွန်ဖက်ရှင်ဆန်ပြီးအနက်နှင့်အဖြူရောင် gingham ပစ္စည်းများ၊ စင်ကြယ်သောအနက်ရောင်အထည်နှင့်အမည်းရောင် PU အသက်ရှူနိုင်သောသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်မိဘကလေးဝတ်ဆင်ရန်အတွက်သင့်တော်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသောကလေးများပါအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အကြိမ်ကြိမ်သန့်ရှင်း။ အသုံးပြုနိုင်သည့်စီစစ်သည့်ပြောင်းလဲခြင်းစာရွက်ပါရှိသည်။ ၎င်းသည်တာရှည်။ ပုံပျက်သော၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာဖော်ရွေမှု၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှု၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၀ ယ်ယူမှုများအားညှိနှိုင်းရန်လာရောက်သည့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားလက်ကားရောင်းသူများကိုလည်းဖိတ်ခေါ်နိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၂၄ နာရီအွန်လိုင်း Q & A. အတွက်အထူးရည်ရွယ်ပါသည်။